Diego Costa oo aaminsan in Real Madrid ay ku garaaci karaan Santiago Bernabeu kulanka Sabtida – Gool FM
(Atletico) 28 Sab 2018. Laacibka ree Spian ee Diego Costa ayaa fariin cad u diray kooxda ay daris wadaaga yihiin ee Real Madrid kahor kulanka horyaalka La Liga ay Sabtida wada ciyaari doonaan.
Los Blancos ayaa Sabtida ku soo dhaweyn doonto kooxda Atletico Madrid garoonka Santiago Bernabeu, kadib guuldaradii kasoo gaartay kooxda Sevilla, Costa ayaana aaminsan in Los Blancos ay xaalada kusii xumeyn karaan kulanka Sabtida.
“Mar walba Atletico Madrid waxay dooneysaa inay guul ka gaarto Real Madrid, sidoo kale Los Blancos iyadana waxay doonayaan inay naga guuleystaan”.
“Kulanka Sabtida ee Madrid Derby, wuu ka duwan yahay kii lasoo dhaafay ee UEFA Super Cup, waxaana dooneynaa inaan badino, sida aan u raboon jirnay kulan kasta ee Madrid Derby ah”.
Si kastaba tababara Julen lopetegui iyo wiilashiisa kooxda Real Madrid ayaa waxay doonayaan in kulnka ay Sabtida ku soo dhaweyn doonaan Bernabeu ay guul kaga gaaraan kooxda Atletico Madrid, si ay u ilaabaan guuldaradii Sevilla.
Valverde oo ku dhawaaqay liiska xidigaha uu kala hor tagi doono kulanka Athletic Bilbao